Home News R/wasaare Kheeyre oo Beesha Habar-gidir u Balanqaadaayo in uu sii deeynaayo Ceeydiid...
R/wasaare Kheeyre oo Beesha Habar-gidir u Balanqaadaayo in uu sii deeynaayo Ceeydiid oo ahaa Ninkii Dilay wasiir Siraaji!!
Kulan dhex-maray Odayaasha Beesha Habar-gidir iyo R/wasaaraha Dowladda Federaalka ah Ee Soomaaliya Xassan cali kheeyre ayaa looga hadlay Arimo kala duwan oo qaarkood u badnaa ashtago Kheeyre ka ahaa qaar ka mid ah siyaasiinta Beeshaasi iyo Sidii loo sii deeyn Lahaa Ceeydiid oo ah Shaqsigii Dilay Allaha u Naxariistee Wasiir Cabaas C/laahi Siraaji.
R/wasaare Xassan Cali Kheeyre ayaa Odayaasha u sheegay in uu si sharuud La’aan ah usii deeynaayo Askarigaasi islamarkaana uu Cafis u fidiyay dhawaaana laga soo saari doono Xabsigga uu ku xiran yahay.
Sababta ugu weeyn ee Talaabadaan uu u qaaday R/wasaare Xassan Cali Kheeyre ayaa waxaa ay tahay in uu iibsado Odayaasha Beeshaasi kuwaasi oo sidaan Horay idinkugu baahinaynba lacago fara-badan oo bille ah loo qoray.
Ehelka Allaha u naxariistee Wasiir Cabaas C/laahi Siraaji ayaa si weeyn uga naxsan Go’aankaan qaldan ee R/wasaare Kheeyre,waxaa sidoo kale la yaab ah in Nin Maxkamad ku riday xukun dil ah lasii daayo.
Aaway Xaquuqdii Allaha u Naxariistee Wasiir Abaas,aaway balan qaadkii Madaxweyne Farmaajo oo ahaa in Go’aanka Maxkamada la fulinaayo intaas oo idil waxaa baal maray R/wasaare Kheeyre oo dan shaqsiyadeed arkaayo.